Izinhlelo ezi-5 zokwenza ama-GIF ngokushesha futhi kalula | Izindaba zamagajethi
Izinhlelo ezi-5 zokudala ama-GIF ngokushesha futhi kalula
UPaco L Gutierrez | 16/03/2021 18:20 | Kubuyekezwe ku- 16/03/2021 22:27 | General, Software
Ama-GIF abekhona kusukela endulo, siwasebenzisa noma nini lapho sikwazi khona, manje ngaphezu kwezinhlelo ezisebenza cishe zawo wonke ama-smartphones eziwafaka phakathi kwezinketho zawo zekhibhodi. I-GIF igama elisho ukuthi Ifomethi Yokushintshana Kwemifanekiso noma ngefomethi yokushintshanisa ihluzo yaseSpain. Le fomethi yenziwe yinkampani yezokuxhumana yaseNyakatho Melika, isekela ubuningi bemibala engama-256 futhi idlala emuva uchungechunge lwezithombe ezihlala phakathi kwemizuzwana emi-5 nengu-10. Azinawo umsindo futhi usayizi wazo mncane kakhulu kunamafayela we-JPG noma e-PNG.
Kuvamile ukuthola ama-GIF esikhundleni sama-MeMes ajwayelekile, ngoba lawa ahambayo futhi asitshela okungaphezu kwesithombe esimile. Kujwayelekile ukubabona ezinkundleni zokuxhumana noma ku-Twitter, yize manje kulula ukubabona kuWhatsApp. Kepha, Kungani usebenzise ama-GIF kusuka kwabanye lapho singazakhela esethu? Kukhona ezinye izinhlelo ezenza lo msebenzi ube lula kakhulu kithina. Kulesi sihloko sizokhombisa izinhlelo ezi-5 ezinhle kakhulu zokwenza ama-GIF ngokushesha futhi kalula.
2 I-SSuite GIF Animator
5 Umenzi we-Giphy GIF
Cishe uhlelo lokuhlelwa kwesithombe olusetshenziswa kabanzi njengenye indlela ye-PhotoShop, engasetshenziswa futhi ukudala ama-GIF amahle kakhulu. Phakathi kwemisebenzi yayo eminingi ukudala ama-GIF, kepha kulokhu Izithombe esifuna ukuzihlela kuzodingeka zibe ngefomethi ye-PNG. Yize lolu hlelo luphelele impela, lungadida kakhulu kubantu abanolwazi oluncane, ngoba izinketho zalo zikhulu kakhulu kangangokuba lukhulu kakhulu.
Uma sifuna ukuyizama futhi sizenzele ama-GIF ethu ngokungeziwe ekuhleleni izithombe zethu njengabachwepheshe beqiniso, singazilanda futhi sizifake mahhala ekhasini lazo iwebhusayithi esemthethweni. Uhlelo lutholakala kubo bobabili IWindows njengeMacOS.
I-SSuite GIF Animator
Uma sifuna uhlelo olulula kepha olusebenzayo lapho sakha ama-GIFs wethu opopayi, ngokungangabazeki lena ebesiyifuna. Amafayela esizowadala kusuka kulolu hlelo azohambisana nazo zonke iziphequluli zewebhu zamanje futhi singabelana futhi sibabuke ngaphandle kwenkinga. Ukuze wenze lokhu, kuzokwanela ukwengeza izithombe esifuna ukuzihlela kahle, ukudala izithombe kahle. Singakwazi ukumisa yonke imingcele, kusukela esikhathini sokuchayeka kuye ngejubane layo.
Umhleli usekela amafomethi we-JPG, PNG, BMP ne-GIF. Into ehamba phambili ngalolu hlelo ukuthi ilula kakhulu ngesisindo esinganakwa esingu-5MB futhi ayidingi ukufakwa kwangaphambili. Singayilanda mahhala ngokuphelele ekhasini lakho Iwebhu esemthethweni.
Isicelo senzelwe kuphela futhi senzelwe ukwakhiwa kwama-GIFs we-animated. Lolu hlelo lokusebenza aludingi ulwazi oluningi ngabahleli bezithombe ngoba kulula kakhulu ukulusebenzisa futhi luzosivumela ukuthi sakhe ama-GIF ethu ngezinyathelo ezilula, ngokubeka izithombe ngokulandelana kwazo futhi silungise isikhathi sokuchayeka ngendlela esiyithandayo. Kuluhlelo lomthombo ovulekile ngakho-ke lukhululekile ngokuphelele futhi aludingi ukufakwa kwangaphambili.
Uhlelo lokusebenza lungasetshenziswa kusuka kudrayivu yepeni noma kwi-hard disk yangaphandle njengoba kungadingi ukufakwa kuhlelo lokusebenza. Ixhasa amafomethi amaningi afaka i-PNG, JPG, BMP ne-GIF. Yize kungadingi ukufakwa, kufanele sivuselelwe iJava eqenjini lethu. I-interface yayo imfishane kepha ilula futhi izikhathi zayo zokulayisha ziphakeme ngandlela thile, kepha umphumela kulindeleke. Uma ufuna ukuzama lolu hlelo lokusebenza ungalulanda kusuka kufayela le- iwebhusayithi yomdali.
Enye yezinto ezihamba phambili zokuhlela isithombe. Uhlelo lokusebenza lulayishwe ngezinketho zokuhlela isithombe, kodwa futhi nezinketho zokwenza ama-GIF ethu. Sithola inqwaba yezinketho eziqoqiwe ezisivumela ukuthi silungise kalula futhi sithuthukise izithombe zethu. Ukwenza ama-GIFs kufanele sisebenzise izithombe ezimbalwa ukwenza isithombe esigqwayizayo. Uhlelo luhle kakhulu futhi lusebenziseka kalula, kepha njengoba kunjalo nge-GIFtedMotion, luhamba kancane futhi luyasinda lapho lucubungulwa, yize umphumela wokugcina ulufanele, kukhona olusheshayo.
Lolu hlelo lumahhala njengakuqala futhi singalulanda ngaphandle kokubhaliswa kwangaphambili ekhasini lalo Iwebhu esemthethweni.
Umenzi we-Giphy GIF
Ekugcineni, uhlelo oluvelela ukusetshenziswa kwalo okulula nokusebenziseka kalula kwalo. Ngayo singakha ama-GIF ama-animated mahhala emizuzwini embalwa nje. Zingakhiwa ngokulandelana kwezithombe ezithathwe kusayithi noma kugalari yomuntu siqu. Yize sinenketho yokudala ama-GIF kusuka kumavidiyo kungaba kugalari yethu noma ku-YouTube noma kwezinye izinhlelo zokusebenza zevidiyo. Akungabazeki ukuthi uhlelo lokusebenza olunikeza ukudlala okuningi lapho udala izithombe zethu ezigqwayizayo ongazisebenzisa noma kuphi.
Into ehamba phambili ngalolu hlelo lokusebenza ukuthi uhlelo lweWebhu ngakho-ke asidingi ukufakwa kwangaphambilini, vele ufake ifayela lakho le- iwebhusayithi esemthethweni bese usebenzisa omunye wemisebenzi ehlukahlukene oyinikezayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izinhlelo ezi-5 zokudala ama-GIF ngokushesha futhi kalula
I-FreeBuds 4i: I-Huawei ibuyela kukhiye wekhwalithi / wentengo